RALAIMAMPISAINARINONY MANOLEA : SIMBA TANTERAKA NY TANANA – MyDago.com aime Madagascar
RALAIMAMPISAINARINONY MANOLEA : SIMBA TANTERAKA NY TANANA
Na dia nisy aza ny firotsahan’ny erikerika madinidinika teto an-drenivohitra, dia mbola tonga maro hatrany teny amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka androany ireo zanak’i dada. Nitatitra ny Diany tany Toliary tamin’iny herinandro lasa teo iny ny Ct Ralaimampisainarinony Manoela. Reraka i Toliary hoy izy, ary simba tanteraka ny tanana. Ankehitriny dia manomboka amin’ny 7 orahariva dia efa tsy misy mandalo intsony. Mifanohitra amin’ny taloha hoy Manoela fa tsy milamina ny tany. Araka ny nambaran’ny olona tamiko hoy ity zanak’i Toliary ity, tao Betioky dia rehefa nandalo tany an-toerana ingahy Ramaroson Alain, dia misy malaso miakatra foana. Ny fanontanian’ny olona hoy izy, dia ny hoe nahoana no rehefa maty ireo zandary rehetra tany an-toerana vao alefa ny helikoptera. Dorona ny tananan’ny olona ary esorina izy ireo hoy Manoela, mba hahafahana miady ny vato sarobidy tadiavin’ny vazaha any an-toerana. Betsaka ny boaderozy aondrana antsokosoko miala any Toliary, fa fanariana Dia ny vahoaka io halatr’omby io. Raha ny zavatra hitako teny an-dalana hoy izy dia zanak’omby mbola kely no entina aty Antananarivo, kanefa mbola tsy azo vonoina. Amidiny tompon’ny izy ireny satria efa mijaly izy ireo. Mahakasika ny fisamborana an’i Tokanono lazaina fa mpimasin’ny Remenabila dia nambarany fa efa nolazain’ny fat fa voatifitra i Tokanono ary maty, ka ahoana no lazaina fa voasambotra indray. Mety mitady mpimasy ny miaramila hoy ity mpanao politika ity, fa matahotra bala. Raha tena mpimasy iny dia niaraka amin-dry Remenabila tany anaty ala. Tapitra ny tanora Malagasy fa atao vonomoka, kanefa ry zareo samy zareo ihany no malaso ao. Ao Bekily hoy Manoela dia misy tany misy fasana ary misy vatosabidy ka tsy nomen’ny mponina ny frantsay. Noho izany dia mila mieritreritra isika fa tsy ny frantsay no hanao io fampiadiana foko io. Momba ny fankanesan-dRajoelina tany Bas Mangoky dia nambarany fa tokony ny Praiministra Beriziky no hankany an-toerana fa tao Ambositra dia nasaina niverina. Ankoatra izay dia nanambara i Manoela fa niditra mivantana tamin’ny antso an-tariby tao Toliary ny faran’ny herinandro teo ny filoha Ravalomanana Marc. Nisy vehivavy iray izay nametraka fanontaniana tamin’ny manao hoe miverena ianao ry dada fa reraka sy mijaly ary mahia izahay. Ny valiny avy amin’i dada hoy Manoela dia ny hoe : »ho avy aho fa aza matahotra fa ho botrabotra ianareo avy eo ». Nisy ihany koa ny mpiasan’ny faritany teo aloha noroahana nametra fanontaniana manao hoe ny filoha no nanao io ka nahatonga anay very asa. Valiny avy amin’i dada hoy Manoela dia ny hoe: « ho avy aho ary averiko amin’ny asanareo ianareo ». Tena tsy ao ny fahefamividin’ny Malagasy izay tsy toy ny taloha. Nanao antso ho an’ny filoha Ravalomanana Marc ihany koa ny tenany hoe miverena ianao fa reraka ny vahoaka ary mitady anao hitondra hivoaka ny ranomasina mena.
Mangataka ny Amerikana hanome tanana ny SADC mba ho tanteraka ilay fihaonana an-tampon’ny ankolafy efatra !
TSY NY FRANTSAY NO AMPIADY ANTSIKA
« Tsy hisy hanaiky isika raha vao mikasikasi-tanana an-dRavalomanana eo !
Auteur Solo Razafy*Publié le 17 septembre 2012 Catégories Politique
15 réflexions sur « RALAIMAMPISAINARINONY MANOLEA : SIMBA TANTERAKA NY TANANA »
17 septembre 2012 à 19 h 54 min
Nous savons tous déjà que ANDRY RAJOELINA (le TGV) est INDESIRABLE aux USA !
Cela veut dire que la CI est bien au courant de tous les meurtres perpetrés par la HAT depuis fevrier 2009, mais,
Il y a LE SEUL PAYS qui soutient ce Putschiste-Assassin, et qui joue l’Incediaire-pompier, qui intervient partout.
Le comble c’est que le Pere Hollande joue la Francafrique comme tous les pourris precedents .
17 septembre 2012 à 19 h 55 min
Ilaina mitraotra amin’izay na ny any an-dafy na ny ao an-toerana , fa aoka izay ity mitaraina sy mitantara lava ny zavtra efa fanta-bahoaka sy firenena maro ity e !
17 septembre 2012 à 22 h 30 min
Akorinao izao Ndefo!!mba tsy kopokopoan’i Razambenao ianao
nanao fahotana mahafaty io, nataon’i domelina fitaovana ianao dia
izao hitsahany an-tampon’ny lohany ny Razambenao, viravirainy tsy hananany hantra mihintsy.
Ny an’i dada anie Ndefo vitany ihany e!!fa ny tody no tsy zakanao, fa toa hanefa hatr@ RAZANA!
ataon’i razanao ahoana no hitahy raha ho kopoan’i domelina indrindra ireto Frantsay ny FASANA
misy azy ireo, toa tsy voaaronao intsony ireto razanareo mankahala FOTSY e??MAHONENA!!!!
Soa lavo ahay hamindra dia mba MIBEBA fa efa akaiky ny farany e!!l@ 21 dec hono ny farany dia
2013 indray anefa i iraikalahy boloky iry no prėsdà, mapmė be fa efa ao izy!!izany hoe efa t@ 2000
no efa nolazai!’ilay boloky fa farany fa mbola mahazo miady varotra angamba hono e!!MAHONENA!!
17 septembre 2012 à 23 h 32 min
Mankahery anareo andriambavilanitra e!
Mankasitraka ary manaiky tanteraka izao finiavana sy fikasana ataon’ny hetsiky amin’ny miralenta sy ny asa ataon’ny AINGA izao.
18 septembre 2012 à 6 h 15 min
Vehivavy noviravirain-dry Lyllison anga iny
de nomeny drogue toa ny fanaon’ny ao Europe ireo importées de son EST
SOURCE D’ARGENT ho andry zalahy!
QUE ne joue-t-on pas LIVE
toutes les Zistoires des autres
Le plus malheureux,
f’efa ritra alou ny ranomasoko,
c’est pas dans la direction « Développement économique et toutes les valeurs qui élèvent l’humanité »
Le régime au pouvoir actuel oeuvre pour L’OPPOSE de la dignité humaine & conservation du patrimoine-richesse national
en réponse aux appels pour le terrain APAISEMENT de l’opposition
Faire RASE MOTTE à Andry-Ratsirahonana-Lylisson-Ramaroson
Sans oublier de revenir aux participants-financerLeCoupD’Etat
(que sais-je encore COMMANDITAIRES)
qui sont à la source de nos maux: OPF OPK si nécessaire
18 septembre 2012 à 6 h 33 min
‎15 TAONA ANIO NY RF
Posted on September 17, 2012 by Tiana Maharavo
RADIO 15 TAONA
7 septambra 1997 no nanonjan’ny onjam-peo 88.6 Mhz voalohany teto Antananarivo. Tao amin’ny Foibe FJKM any amin’ny rihina fara-tampony no niaina ny Radio. Radio mitory ny maha-olona ka ny ara-panahy no laharana voalohany vokarin’ny Radio. Radion’ny Fiangonana FJKM ny Radio Fahazavana. Ny fampandrosoana ny olona rehetra sy ny olona manontolo no tarigetrany tao anatin’izay 15 taona izay. Nosahaniny ny hitodihan’ny olona makany amin’ amin’Andriamanitra. Tsy afaka ilay ilom-pahazavana ny Radio ankehitriny. Lasibatry ny krizy politika nambolen’izao Fanjakana Malagasy izao ny Radio nandritra 3 taona faraparany.]
18 septembre 2012 à 6 h 54 min
TSETSATSETSA TSY HARITRA (do not take personal)
1°) I Manoela koa Loterana mafana fo an ==>
[……Grand Synode FLM : encore des tentatives de corruption
12/09/2012 à 9:52 3 commentaires
Les grandes églises constituent toujours un enjeu de taille pour les politiciens. Des participants au grand Synode du FLM qui se tient à Toliara ont révélé de faits de tentative de corruption pour influencer le vote de ce jour….]
2°) fa inon re iton ê ==>
[…..Après les JMJ à Antsiranana, les JFLM à Fandriana à partir du 18 Septembre
17/09/2012 à 14:45 1 commentaire
30 000 jeunes de l’église luthérienne FLM sont ainsi attendus à Fandriana à partir de demain.
L’occasion pour une certain Tantely Andrianarivo de se rappeler au bon souvenir de tous en offrant une enveloppe de 5 millions pour l’organisation de cet évènement….]
18 septembre 2012 à 7 h 22 min
Miasa vao maraina izany an !
Asa na izaho no diso na tsia, fa taloha be an’io daty lazain’ilay Tiana maharavo io, dia efa nahita aho teo akaikin’ny IGN Ambanidia, panneau teo amin’ny trano amoron-dàlana izay, misy soratra hoe Radio Fahazavàna !!
Asa rahatoa ka tao no niandohany ?
FLM : Be vola ny olona ê ! Ambin’ireo tsy zaka angamba !!
Fa mba misy atao hihomehezana vao maraina indray aloha ity. Ny mpiaro ny ara-dalàna dia mifanampy lalan-dava koa dia miala tsiny aho rahatoa ka manitsy kely anao ! Tsy azo atao ny mijery aron’an-tava, indrindra fa namana mahafinaritra !
Hoy ianao etsy ambony : FAIRE RASE MOTTE à Andry-Ratsirahonana-Lylison-Ramaroson !
Faire table rase, angamba no tianao ho lazaina !
Raha ny motte-ndry lerony, voalohany asa raha misy (mety hampieritreritra ihany), ary raha misy tsy izaho mihintsy aloha no hiazakazaka hanao an’izany ! MDR !!!!
Pierre Louÿs dans son Manuel de civilité pour les petites filles, à l’usage des maisons d’éducation, en 1929 avait écrit : » Si l’artiste représente la déesse sans poils, c’est que Vénus se rasait la motte » !!
18 septembre 2012 à 8 h 24 min
efa nanokatra google ihan ny tena hijery sao miteniteny foana
saingy ela loatra, moa lasa ny haingam-panahy, voatsindry ny « send »
kay ity hono: http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=1498637
misaotra hatrany tsy misorona, « la connaissance des expressions IZANY conduit à la revue des Zhistoires » hahaha
ilay anadahiko solon’ny lahimatoa izay moa rehefa dôzy dia mitady hahatonona ny mot « patsa » raha « rambon-damba » no filaza rehefa mamangy fahoriana (TapaTsinayNoManongoTena)
mampahatsiahy fony tany zamerika: teny Firantay no tao antsaiko nilaza adjectif iray t@ ilay superieur-ko – de tsy takatro tsara fa nantsoiny moramora aho hitandrina!
TENY AMPERIN’ASA IO ie WorkPlace (LaughOutLoud)
tsy afa-misaina lalina io resahinao farany io.
Feeling: mba te hiverina hamaky ilay boky « DaVinciCode » & « HANNAH de Paul-Loup Sulitzer »
(ito farana mitantara ny vanimpotoana nahatongavan’ny fotsy hoditra tany zamerika)
18 septembre 2012 à 9 h 15 min
Voler en rase-mottes, présentement quelques possibilités pour traduire : Flying at low altitude or low-flying ; skimming ; swooping ; buzzing ;…
Tananews : Omer Beriziky » Andry Rajoelina et moi même, sommes prêts à appliquer la Feuille de route » !
Nandritr’izay, nanao inona fotsiny ? Nibizina ? Mikoropaka satria nahatsapa fa atramin’izao dia toa mbola mitombina ihany lay hoe SANKALITE, any ka tsy omen’ny be kintana taratasy hitsangatsanganana, toa ilay natao tany Puoidifou !!! Obama tsy i Sarkozy !
Momban’ny fanambaràn’i Beriziky, saika adino ny tena important !
« ARTICLE PAR ARTICLE » hono ê ! Ndray !!!!
Fa angaha raha manao an’izao fanambaràna izao, dia hisokatra moramora ny varavaran-danitra ???
Omeo anay aloha ny daty hatongavan’ny Filoha mamimbahoaka, ary lazao amin’ny vahoaka fa vonona ihany koa ianareo ny handray azy amin’ny fomba ôfisialy sy tena mendrika, amin’ny maha Filoham-pirenen’azy !! !
Ny tena mahagaga anie Manoela dia mahita ianareo fa mitrongy @ tanymihitsy Ramalagasy, nefa rehefa ao @ MAGRO dia vavaka no asaina atao. tsy sahy mivoaka mihitsy ary raha sendra mivoaka dia tonga dia miverina haingana ao an-kianja. Aiza ny hetsiky ny Tokobetelo ? Aiza ny hetsi-bahoaka ? Aiza ny paik’ady ? Aiza ny fiarahan’ny mpanohitra ? Ny fiverenenan’ny filoha anie ka tsy hoe atao kabary fotsiny fa mila hetsika e. Zafy sy ny GTT ohatra dia nametraka fitoriana, i Dada dia manao izay tratrany @ diplomasia, fa ny vahoaka mpanohana an-dRavalo dia saika vokisana kabary sy fivavahana fotsiny. Tsy ny kabary na ny fivavahana no ratsy fa ilay fampiasana azy ireohanakanana ny Zanak’i Dada tsy hihetsika. Tsy mampiseho mihitsy isika Malagasy hoe tsy manaiky io fitondran’ny mpanogam-panjakana io ary mitaky ny fiverenen’i Ravalo.
Izany koa anefa tsy milaza hoe tokony hiovoaka fahatany ao @ MAGRO. Fa mba misy ihany ny azo atao. ireo herim-pamoretana lasa any atsimo ireo dia tsy ahita hatao vfe ny mpitarika sa hoe mbola ao ny EMMOREG-n’i Risara Baomba. Fandresena hoan’ny raha mihetsika eo ireo …..
18 septembre 2012 à 17 h 24 min
Tsara angamba manazava etoana, fa raha misy olona tena mbola azo hitokisana, dia anisan’izany Ingahy Manoela ! Efa mba manao an’izay vitany izy ê !
Mbola eo ireo sefo detamazaoro, aryizy azo lazaina fa jeneraly ; mbola misy olona eo amboniny !
Izy aza, saika NOFITAHIN’NY SASANY TAMIN’NY FARAN’NY ERINANDRO TEO » ! Azony tsara ny tiako ho lazaina !
Raha tsy nivoaka atramin’izay, dia tsara angamba ny miandry ny 8 ôktôbra, na dia nisy nilaza aza fa ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana dia « exceptionnel » !
Asa, 10 andro alohan’ny fifidianana ve no dikan’izany sa inona ?
Isika manana internet no mila mihetsika mafy koa, manampy an-dry zareo ! Anisan’ny cibles tokony asiana mafy izao ohatra dia ny FIDH sy ny HRW FRANCE !
18 septembre 2012 à 18 h 08 min
Raha toa aza ka tsy hivoaka an’ny MAGRO. Dia tsy hisy ve hetsika hafa azo atao ? Ny marina mantsy dia tsy dia hatokisan’ny maro intsony ireo mpitarika fa i Dada no handradraina ka mikipy fotsiny. Raha mandinika ianao dia ny VOT sy ny VAMI dia niala tanteraka tao @ MAGRO fa sady voadaka no tsy te hiverina ao intsony satria tsy tolona no atao aho fa zavatra hafa. Ny maro @ mpanohana dia saika tsy manakao na dia maro ihany aza ny olona tonga rehefa sabotsy. Raha higadona anefa i Dada dia avy 100 eny nohon’ny MAGRO ny olona. Dia hilaza ireo mpiratarika hoe olon’ny MAGRO daholo ireo. Tena mahagaga fa tsy tsapan’izy ireo mihitsy ilay tsy fahadisom-pijerina.
Raha i Manoela dia azonao antoka, izaho manokana moa dia efa nifanehatra mafy taminy satria izy mora miresaka haingana ity adi-poko ity, toy ny hoe : ianareo Antananarivo no nanogana an’i Dada.
Tsy dia any loatra anefa ny olana fa ilay tolona no tsy mandroso. Misy ireo mpitarika toy ireo avy ao @ TEZA sady matotra no tsy mitanila, dia tsy mba henoina, ny ao @ MFM indray dia ekena na dia somary be ambadika sy kajikajy aza, ary ny TIM dia fivavahana lava izao.
Amiko raha te hampiseho an’ny izao tontolo izao isika fa tenamitolona dia manao hetsika, izay irery ihany no ahafantrana, . Nefa hetdsika inona ? Hetsika @ aino aman-jery, hetsika an-dalambe, hetsika any @ fitsarana, hetsika politika, fiarahana @ mpanohitra an’i Rajoelina ohatra, hetsika ara-kolotsaina, toy ny hoe manandefa baloma marobe, na sosialy, manao asa soa. Ny peta-dridrina sy ny fizarana ttasy hanentanan ny vahoaka azo atao daholo nefa aiza izany ? Lazaina foana fa tokony handefitra sy tsyhihetsika nefa ny fahavalo etsy manararao-paty. « je t’aime moi non plus » hoy ilay fiteny. Isika mitady fihavanana @ olona tsy fanao havana sy tsy te hihavana. Vao mainka mandetika ny tolona dia kivy ny olona.
Farany, tsy hisy mihitsy olon-kafa hisolo toerana antsika Malagasy hampadroso io tolona io fa isika ihany no afaka sy tokony hanao izany. Ny miandry rahampitso lava mahavery namana.
18 septembre 2012 à 22 h 03 min
Tsara io fanamarihana ataonao io ry lazalazao.Efa nanao hetsika izahay ao amin’ny htpp://lafy8.forumactif.ca .Efa nandefa tatitra tany amin’ny FIDH tany Hollande izahay,manao hetsika ara-haino aman-jery ary koa manasa ny daholo be hiaraka aminay hanatanteraka ny tsangan’asa « Akany » izay hita ao amin’ny io sehatra firesahana io ambony io.
Noho izany dia manasa ny tsirairay hitselika kely ao.Amiko ny hanaovana hetsika toy itony dia satria meloky ny lalàna ny « non-assistane à personne en danger » amin’ny maha eo-bavan’ny fahafatesana ny olona tratry ny hanoanana ary koa noho ny fitiava-namana izay didy fantatsika mianakavy ny fihaviany.
Raha aravina izany dia fo feno fiantrana no manainga aho hiantso anareo hihetsika.Tsara lazaina koa fa misy vahiny maro mitselika ao satria maro koa izy ireo no te-hanampy ny vahoaka malagasy izay 76% no miaina ao anatin’ny fahantrana.
Précédent Article précédent : RAJOELINA NO MIVAROTRA TANINDRAZANA
Suivant Article suivant : RAVELOSON CONSTANT : ISIKA REHETRA NO SINGA-BOLO HANDAVO AN-DRAJOELINA